ပီတိ: အားလပ်ရက် ၀၉ (၂)
Posted by P.Ti at Tuesday, October 13, 2009
ဂျပန်မချောချောလေးတွေကို သဘောကျ...အဲလေ သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောကျနေတာကိုး။
တကတဲမှပဲ... လာကြိုနေတဲ့ ဂျပန်မ ချောချောလေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ဂျပန်ကို သဘောတွေ စွတ်ကျသွားတော့တာပဲပေါ့...
ဂျပန်မလေးတွေ ဖျတ်ကနဲမှင်သက်သွားတာက စပြီး ဂျပန်ကိုသဘောကျသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်...ဟိ ။
တကယ်လည်း ဝန်ဆောင်မှူကကောင်းတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်..ဖြစ်သင့်ပါတယ်...
ပီတိ ထင်တာ မလွန်ပါဘူး။ ငါ့မောင်ဖက်က ထောက်ခံပါဒယ်၊ ထောက်ခံပါဒယ်။
ဆက်ပါအုံး...။ စာပြန်ရေးတာရော၊ ခရီးအကြောင်း ရေးပြတာရော ၀မ်းသာတယ် သိလား။
ဂျပန်ကို လာလည်ချင်သော်လည်း ပိုက်ပိုက်အခက်အခဲကြောင့်
I can't wait to read more. :-)
BTW I hadaknowledge that most of the Japanese girls like Tall,Dark & Handsome like you. :-)))))